Astaanta American Express ayaa dib loo habeeyay markii ugu horeysay muddo 40 sano ah | Abuurista khadka tooska ah
Markaan nidhaahno taasi waxay ku timaaddaa mid waxtar leh horumariyo astaanta si ay ula socoto gacanta Marka loo eego heerarka maanta ee naqshadeynta oo ha ku taariikhaysan, waxaa jira astaamo aan u duqoobin sida ugu xun ee ay umuuqdaan. Waxaa jira taxane wanaagsan oo iyaga ka mid ah oo sii wadaya inay yeeshaan tilmaamo naqshad isku mid ah sidii tobanaan sano ka hor iyo sida loo yiri oraahda, wixii shaqeeya uma baahna in wax laga beddelo.
Si kadis ah, astaanta American Express ayaa dib loo habeeyay markii ugu horreysay muddo 40 sano ah. Mid ka mid ah shirkadahaas oo u heellan bangiga iyada oo loo marayo kaararka in 2018 ay dib u habeyn ku sameeyeen astaantooda oo leh isbeddelo yar yar. Waxaanuna ku dhowaan karnaa inaanay badnayn laakiin ay yar yihiin oo mid aad u cad: asalka buluuga ahi wuxuu ka bilaabmaa wejigiisa ilaa midabka fidsan.
Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan dib u qaabeynta astaanta American Express ayaa ah in markaan ku jirno daqiiqad halka midabka midabkiisu yahay mid aad u socda iyo in ay adeegsanayaan noocyo kala duwan si ay u cusbooneysiiyaan astaantooda, shirkadda Mareykanka ah waxay siisaa leexin si ay uga gudubto midabkeeda una gudubto midab fidsan
Ku sii wad buluug iyo sharraxaad isku mid ah qaabka qorista si aan ugu sii wadno inaan maanka ku hayno ku xidha xarfaha taxanaha ah inay iyagu iyagu soo rogaan waxa American Express uu ahaan jiray, kuna ahaan doono meerahan adduun.
Mid kale oo ka mid ah isbeddelada yar-yar ee astaanta ayaa ku xiran qaab qoraalka, on dhammaan warqadda "R" qaadashada janjeeraad kale oo lugta ah oo qaban doonta "P". Halkii laga qalloocin lahaa oo laga bilaabi lahaa dhamaadka qallooca "R", waa si toos ah jaantus ahaan in la bixiyo dareemo kale.
Waxaan sidoo kale helnaa taas "X" kuma xirna "E" iyo "P"Taabadalkeed, waxay umuuqataa mid gooni ah, inkasta oo ay la socoto shax madhan oo dhex marta font. Waa tan sheekada astaanta Apple si loo arko qaab kale oo loo fahmo qofka horumarkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » American Express ayaa dib u naqshadeynaysa astaanteeda markii ugu horreysay muddo 40 sano ah
CorelDRAW Graphics Suite 2018 hadda waxaa lagu heli karaa naqshad cusub iyo astaamo tafatirka sawir
Erayada iyo macnahooda macquulka ah